Ururka haweenka Wazda oo maanta tababar u soo xiray 180 haween ah “Dhageyso+Sawirro” – Radio Muqdisho
Munaasabad Shahaaddooyin lagu guddoonsiinayay haween dhameystay tababar ay fulineysay Hey’adda Wazda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Tababarka oo socday muddo Afar bilood ah ayaa loo qabtay 180 haween danyar ah, kaasoo ku saabsanaa “Barashada dhaqaalaha guriga”, waana dufcaddii Saddexaad ee hey’adda Wazda u qabato tababar noocan oo kale ah.
Munaasabadda shahaaddooyinka lagu guddoonsiinayay haweenkaasi oo lagu qabtay xarunta Integrated Learning Institute, ee magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan.
Gudoomiyaha hey’adda Wazda marwo Siraad Maxamed oo mudaasabadda ka hadashay ayaa sheegtay in ardayda loo soo xiray tababarkan ay yihiin dufcaddii Sadexaad oo loogu magac daray 8-da Maarso.
Waxeyna kula dardaarantay xubnaha tababarka loo soo xiray iney ka faa’iideystaan aqoonta ay ka kororsadeen tababarka muddadii uu socday, islamarkaana ay ku dubbaqaan howl maalmeedkooda.
Marwo Siraad Maxamed oo hadalkeeda sii wadata ayaa haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeysay munaasabadda 8-da Marso, iyadoo kula dardaarantay iney midoobaan, islamarkaana ay gacan ka geystaan horumarinta dalka iyo tan qoysaska.
Tababarkan ayaa waxaa gacan ka geystay hey’adda Shabeelle Foundation iyo ururka macalimiinta Qaranka Soomaaliyeed ee SONUT.
Codka marwo Siraad Maxamed
R.W. Cumar oo kulamo kula qaatay Dhuusamareeb Odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka "Sawirro"